Ceibal Jam!: Mamorona fampiharana eo an-toerana ho an’ny filàn’ny fampianarana ao Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2018 3:46 GMT
Nanaraka vondrona mpianatra sy mpampianatra mpilatsaka an-tsitrapo avy ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Repoblika izay nandeha tany Santa Lucía, Orogoay mba hampiseho ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ny fomba fampidirana ny sehatra EduBlog ao anatin'ny asa an-dakilasy izahay. Araka ny nomarihina tao amin'ny lahatsoratra, ny famolavolana solosaina finday mba hifanaraka amin'ny filàn'ireo tanora mpianatra any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana dia tsy dia sarotra loatra noho ny famoronana fampiharana sy votoaty ilaina mba hahatonga ireo solosaina finday ho fitaovana ilaina eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Rehefa avy nampiasa vola an-tapitrisa dolara tamin'ity fanandramana goavana fametrahana solosaina finday iray eo am-pelatanan'ny mpianatra tsirairay ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ao Orogoay ity, dia mahamenatra raha voafetra amin'ny fampiasana fampiharana tsotra efa nipetraka mialoha isaky ny solosaina XO tsirairay ny mpampianatra.
Soa ihany fa ho an'ny rafi-panabeazana any Orogoay, nanangana ny hetsika Ceibal Jam! ny vondrona programera, mpampianatra, sy mpahay teknolojia mpirotsaka an-tsitrapo mba hampivelatra ny fampiharana amin'ny solosaina finday XO izay mifanaraka amin'ny filàn'ny mpampianatra sy mpianatra sekoly ambaratonga voalohany any Orogoay. (Efa nanoratra momba ny fivorian'ny Ceibal Jam voalohany tamin'ny taona lasa i Rezwan.) Gabriel Eirea, mpampianatra injeniera ao amin'ny Oniversite ao amin'ny Repoblika sady mpandrindra ny Ceibal Jam !, mamaritra ny iraka ataon'ny vondrom-piarahamonina:
Afaka nanatrika ny fivorian'ny Ceibal Jam tamin'ny herinandro lasa tao amin'ny Oniversiten'i Montevideo aho izay nahitana ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 50 teo ho teo mba hampiseho ireo fampiharana novolavolainy, ary hanolotra fampiharana vaovao, sy hanatsara sy handrakitra ireo fampiharana efa misy toy ny Ceibal-Chess, EduBlog, ary PlayGo.
Araka ny fanantitranteran'i Gabriel Eirea tamin'ny horonantsary etsy ambony, iray amin'ireo laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao ho an'ny Ceibal Jam ny handrafitra fampiharana kely izay azon'ny mpampianatra ampiasaina amin'ny fampianarana foto-kevitra tokana mandritra ny andro vitsivitsy; ohatra, fampiharana iray manampy ny mpianatra hianatra ny tabilao fampitomboana, na mba hahatakatra bebe kokoa ny foto-kevitra fizaràna. Raha ny marina dia i Eirea mihitsy no nandray anjara tamin'ny fandrafetana ny Conozco Orogoay, fampiharana tsotra manampy ny mpianatra hanatsara ny fahaizan'izy ireo ny jeografian'i Orogoay.
Amin'ny fiheverana izany, Ana Cichero nanolo-kevitra lalao ho an'ny solosaina finday XO mba hahatonga ny fianarana ny fototra matematika ho mahafinaritra sy ifarimbonana. Minitra fohy taorian'ny tolo-keviny, mpandray anjara maro tamin'ny fivoriana no efa nanoratra kaody mba hampiditra ny tolo-kevitra ho ao anaty fandaharana. Nampahafantatra ny fototry ny fitenin-kaody Python sy ny fomba famolavolana sary avo lenta, ary tolo-kevitra hamorona lalao mampianatra ny zon'olombelona amin'ny ankizy ny fivoriana hafa nandritra ny tontolo andro. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny Ceibal Jam ianao, mitroka ny fandaharan'izy ireo amin'ny rafi-piasana Sugar, ary manaraka hatrany ny fivoaran-draharaha ao amin'ny tranonkalan'izy ireo.